Sina SEBIC 700c kapila mivezivezy kilasika eraky ny tanàna ebike orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Funncycle
maotera Motor tsy misy borosy, 48V 500W aoriana
Max Speed 30-50km / h
Laharana maodely BEF-ID700RM
filanjana 700 * 45C firaka vita amin'ny alimina 6061, nohosorana TIG
Fork fampiatoana 700C, firaka + firaka
kodiarana INNOVA 700 * 45C A / V Mainty
Bateria 48V 13AH, bateria Lithium, misy charger-SANS 2A
Ankafizo ny tombo-tsoa rehetra amin'ny bisikileta fa tsy misy fihenjanana amin'ny SEBIC 700RM Electric Hybrid Bike. Ilay e-bisikileta 700RM dia misy moto pedal assistant 500-watt manampy anao-bisikileta ahafahanao mitaingina lavitra kokoa ary mitaingina havoana mideza mora foana. Safidio fotsiny ny haavon'ny fanampiana anao amin'ny mpanara-maso sy ny pedal thumb toy ny mahazatra. Ny motera dia hametraka izany mihoatra ny aomph ao aorian'ny pedal, ka tsy mila miahiahy ianao sao ho lany etona amin'ny antsasaky ny dianao. Ny Wanderlust koa dia manasongadina dingana kely iray amin'ny alàlan'ny endrika aluminium alim-baravarankely miaraka amin'ny fork fampiatoana sy tsatokazo misy toerana izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny fivezivezena ary koa ireo zava-niainana manodidina ny tanàna. Ny mpandeha 8 hafainganam-pandeha dia manome fanovana haingana sy malefaka, ary ny freins eo aloha sy aoriana kosa dia manome fijanonana matevina amin'ny fepetra rehetra. Alim-baravarankely misy alàlan'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny kodiarana malefaka miaraka amina casing manokana e-bisikileta mba hanomezana fitoniana sy fahombiazana Plus, ny seza misy seza tsy azo ampiasana fitaovana dia manamora ny fahitana fitadiavana milamina. Mitaingina moramora amin'ny bisikileta SEBIC. Ankafizo ny fahalalahana mitaingina SEBIC.
■ Kodiarana 700c mifanaraka amin'ny mpitaingina 64 ka hatramin'ny 74 sentimetatra ny halavany.
■ Fanampiana ambaratonga elektrika dimy ambaratonga raha mandeha tongotra ianao; manampy hatramin'ny 20 mph, maharitra 45 kilaometatra.
■ 6061 alim-baravarana alimina vita amin'ny alim-by dia manamora ny fidinana sy ny fivoahan'ny bisikileta, raha ny forona fampiatoana sy ny fipetrahan'ny seza kosa dia manampy amin'ny fitrohana fivontosana eny an-dàlana mba handehanana tsara kokoa.
■ Moto mitondra fiara 500-watt manampy ny maotera mpamily hub mamela anao handeha lavitra ary mitaingina lava kokoa noho ny teo aloha. Ny bateria dia tafiditra ao anaty fidinana ambany ho an'ny foiben'ny gravité ambany sy fanatsarana ny fitoniana.
■ Fanovana 8-hafainganam-pandeha miovaova dia manome fanovana haingana sy malefaka.
■ Ny freins eo aloha sy aoriana dia mampitsahatra ny fepetra rehetra.
■ Ny sisin'ny rindrina avo roa heny dia maharitra maharitra, ary ny kodiarana kosa dia misy e-bisikileta voafaritra tsara hanomezana fitoniana sy fahombiazana azo atao tsara indrindra.
■ Bara-bitsika sy baraingo volombava azo ovaina, ahafahanao miantso amin'ny toeranao mitaingina tonga lafatra.
Teo aloha: SEBIC 20 mirefy 8 haingam-pandeha fampiatoana bisikileta elektrika 48v 500w
Manaraka: SEBIC 26 mirefy malaza amin'ny fomba fanatanjahan-tena an-dàlambe mandeha bisikileta mandeha amin'ny herinaratra mahery